Ahoana ny fomba hamafana endri-tsoratra amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hamafana endri-tsoratra amin'ny Mac
Omaly fotsiny dia hitantsika ny fomba ahafahantsika manafoana endri-tsoratra amin'ny Mac misy dingana tsotra vitsivitsy ary hitantsika anio ahoana no ahafahantsika manala an'io endritsoratra io na hafa amin'ny fomba tena tsotra koa.
Tokony ho mazava fa ny Mac antsika dia efa tonga miaraka amina endritsoratra maro ao anatiny, ary ankoatr'izay, manana ny safidy foana isika hampidina sy hametraka endritsoratra maro hafa avy amin'i Apple mihitsy na avy aiza. Raha tsy tianao hipoitra endri-tsoratra ao amin'ny apps-nao dia azonao atao ny mamono na mamafa azy amin'ny fotoana rehetra ary amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny safidy hamafana azy.
Fafao ny endritsoratra
Ny fomba fanesorana ireo endritsoratra ireo dia tsotra kokoa noho ny toa azy ary mila manazava fotsiny isika fa raha manao ity dingana ity hampiasa ny endri-tsoratra indray isika dia ilaina ny mametraka azy io indray amin'ny Mac, izay Hafa noho ny safidy hitantsika omaly hanalana ny endritsoratra io.
Tsotra be izao ny fanatanterahana sy ny famongorana ireo endritsoratra izay tsy ilaintsika intsony amin'ny Mac dia mila misafidy ny endri-tsoratra avy amin'ny Font Catalog (izay azo idirana amin'ny Launchpad) isika ary misafidy ny safidy Manova> Delete. Ny Type Catalog voafantina mivantana dia nafindra any amin'ny Fako ary tsy ho afaka mampiasa azy amin'ny fampiharana intsony ireo mpampiasa. Ity safidy ity dia dingana iray hafa indray amin'ny "famonoana" ny endritsoratra ary afaka ataontsika amin'ny Mac rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hamafana endri-tsoratra amin'ny Mac
Ahoana ny fomba hamohana ny Mac amin'ny finday Android
Apple Music very ny lohan'ny R & B sy Hip-Hop, mandeha any Spotify